Third American Trade Show
ရောငျးရနျကားမြား အငှားကားမြား ကားဆကျစပျပစ်စညျးမြား
ကားသတငျး / အထူးစြေးနှုနျး / ပှဲအစီအစဉျမြား
အထူးစြေးနှုနျး နှငျ့ ပှဲအစီအစဉျမြား ကားသတငျး
ကားသုံးသပျခကျြမြား ကားစငျတာမြား Comment ဆကျသှယျရနျ / အကွောငျး လော့ဂျအငျ အကောငျ့ဖှငျ့ရနျ
အထူးစြေးနှုနျး နှငျ့ ပှဲအစီအစဉျ အသေးစိတျ
အထူးစြေးနှုနျး သို့ ပှဲအစီအစဉျ ကာလ 07 - 09 Jun 2019
Posted By: motorcarmyanmar
မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ နေရာအနှံ့အများအပြား မြင်တွေ့လာရပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ကားတွေအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ American Brand New Ford ကားများကိုယခုလာမယ့် ဇွန် ၇၊၈၊၉ ရက်များမှာ တပ်မတော်ခန်းမမှာကျင်းပမယ့် 3rd American Trade Show 2019 မှာ Main Sponsor အဖြစ် Ford Myanmar မှဝင်ရောက်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား မြင်တွေ့လာရတဲ့ Ford ကားများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ကားကိုယ်ထည် တောင့်တင်း ကြံ့ခိုင်မှုရှိခြင်း၊ရာသီဥတု ဒဏ်လည်း ခံနိုင်သည့် အပြင် လမ်းအနေအထားမရွေး မောင်းနှင်နိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လည်း အထူးသင့်လျှော်အဆင်ပြေပါသည်။
ထိုကြောင့် Ford ကားများအား စိတ်စားသူများ ကိုယ်တိုင်ကိုကျ စိတ်တိုင်းကျ လေ့လာစမ်းသပ်နိုင်ရန် ထိုပွဲကြီးအား လာရောက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အခုချိန် ဒီလို မိုးရာသီမှာ ဘယ်လို လမ်းအနေအထားမျိုးမှာမဆို ယုံကြည်မှုရှိရိ်ှဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ခရီးသွားလာနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းမြင့်မားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကားအမျိုးအစား Ford Ranger နဲ့ Everest များကို အထူးအထူး Monsoon Special Promotion ဈေးနှုန်းများဖြင့် လာမယ့် 3rd American Trade Show https://www.facebook.com/events/356491908529264/ မှာ အရယူပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
အချိန်- ၇ ရက်နေ့ မှ ၉ရက် ဇွန်လ ထိ ဖြစ်ပါတယ်။
”3rd American Trade Show 2019 Yangon”
7th -9th, June / Tatmadaw Hall
”3rd American Trade Show 2019 Yangon” ပွဲကြီးကို ရန်ကုန်မြိ့တပ်မတော်ခန်းမမှာ ဇွန်လ ၇/၈/၉ ရက်နေ့တွင် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅နာရီထိကုမ္ပဏီကြီးများစွာဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ကုန်များနှင့်လုပ်ငန်းများကို တနေရာထဲတွင်အမျိုးအစားစုံလင်စွာရရှိနိုင်သည့်အတွက် လုံးဝလက်မလွှတ်ဘဲတက်ရောက်သင့်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါသည်။
ဤပြပွဲတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ နည်းပညာမြင့် စက်မှုပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ရတနာနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး လုံခြုံရေးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပါဝင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
- PUBG Tournament
- Food Competition နှင့်
အခြားအခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် အစီအစဉ်များလည်း ထည့်သွင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- Automobile and Heavy Machinery
- Technological Products (Mobile, Electronics, Electricals, IT Products)
- Culture and Business Exchanging
စသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပါဝင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
????????Myanmar Promotional Services Co., Ltd
- Phone: 09788000966, 0943096666,
- Email: mpsexhibition@gmail.com
- Website: www.mps.com.mm
- Event Page: https://www.facebook.com/events/356491908529264/?ti=cl
- Address: No.22/24, 7(A), Corner of Shin Saw Pu Road & Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon.
မွနျမာနိုငျငံတဝှမျးမှာ နရောအနှံ့အမြားအပွား မွငျတှလေ့ာရပွီး လူကွိုကျမြားတဲ့ ကားတှအေဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့တဲ့ American Brand New Ford ကားမြားကိုယခုလာမယျ့ ဇှနျ ရ၊၈၊၉ ရကျမြားမှာ တပျမတျောခနျးမမှာကငျြးပမယျ့ 3rd American Trade Show 2019 မှာ Main Sponsor အဖွဈ Ford Myanmar မှဝငျရောကျပွသသှားမှာ ဖွဈပါတယျ ။
မွနျမာနိုငျငံ အနှံ့အပွား မွငျတှလေ့ာရတဲ့ Ford ကားမြားသညျ စကျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေးကောငျးမှနျခွငျး၊ကားကိုယျထညျ တောငျ့တငျး ကွံ့ခိုငျမှုရှိခွငျး၊ရာသီဥတု ဒဏျလညျး ခံနျိုငျသညျ့ အပွငျ လမျးအနအေထားမရှေး မောငျးနှငျနိုငျပွီး မွနျမာနိုငျငံနှငျ့လညျး အထူးသငျ့လြှျောအဆငျပွပေါသညျ။
ထိုကွောငျ့ Ford ကားမြားအား စိတျစားသူမြား ကိုယျတိုငျကိုကြ စိတျတိုငျးကြ လလေ့ာစမျးသပျနိုငျရနျ ထိုပှဲကွီးအား လာရောကျခဲ့ဖို့ ဖိတျချေါအပျပါသညျ။
အခုခြိနျ ဒီလို မိုးရာသီမှာ ဘယျလို လမျးအနအေထားမြိုးမှာမဆို ယုံကွညျမှုရှိရျှိဖွငျ့ သငျ့စိတျကွိုကျခရီးသှားလာနိုငျဖို့အတှကျ ကိုယျထညျဒီဇိုငျးမွငျ့မားပွီး စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ ကားအမြိုးအစား Ford Ranger နဲ့ Everest မြားကို အထူးအထူး Monsoon Special Promotion စြေးနှုနျးမြားဖွငျ့ လာမယျ့ 3rd American Trade Show https://www.facebook.com/events/356491908529264/ မှာ အရယူပိုငျဆိုငျလိုကျပါ။
အခြိနျ- ရ ရကျနေ့ မှ ၉ရကျ ဇှနျလ ထိ ဖွဈပါတယျ။
”3rd American Trade Show 2019 Yangon” ပှဲကွီးကို ရနျကုနျမွိ့တပျမတျောခနျးမမှာ ဇှနျလ ရ/၈/၉ ရကျနတှေ့ငျ မနကျ ၉ နာရီမှ ညနေ ၅နာရီထိကုမ်ပဏီကွီးမြားစှာဖွငျ့ စညျကားသိုကျမွိုကျစှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပွီး အရညျအသှေးကောငျးမှနျသောအမရေိကနျနိုငျငံထုတျကုနျမြားနှငျ့လုပျငနျးမြားကို တနရောထဲတှငျအမြိုးအစားစုံလငျစှာရရှိနိုငျသညျ့အတှကျ လုံးဝလကျမလှတျဘဲတကျရောကျသငျ့တဲ့ပှဲတဈပှဲဖွဈပါသညျ။
ဤပွပှဲတှငျ အမရေိကနျနိုငျငံမှ နညျးပညာမွငျ့ စကျမှုပစ်စညျးမြား၊ စားသောကျကုနျမြား၊ အိမျသုံးပစ်စညျးမြား၊ လကျဝတျရတနာနှငျ့ အလှကုနျပစ်စညျးမြား၊ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားလုပျငနျးမြား၊ ဆကျသှယျရေး လုံခွုံရေးနှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြားကို ပါဝငျပွသသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
- Food Competition နှငျ့
အခွားအခွားသော စိတျဝငျစားဖှယျ အစီအစဉျမြားလညျး ထညျ့သှငျးကငျြးပသှားမညျဖွဈပါသညျ။
စသညျ့ ကုနျပစ်စညျးမြားကို ပါဝငျပွသသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
Myanmar Promotional Services Co., Ltd
Ford Car Myanmar
Ford Everest Car
Ford Ranger Car Myanmar